दूध यसरी पिउनु स्वास्थका लागि फाइदाजनक छैन, आयुर्वेदले यसो भन्छ
दूधलाई तपाई शुद्ध रुपमा वा बेसार र अन्य कुराहरु मिसाएर पनि पिउन सक्नुहुन्छ । दूधमा प्रोटिन, भिटामिन ए, बी१, बी १२, बिटमिन डी, पोटासियम र म्याग्नेशियम हुन भएकाले यो निकै पोषक मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार दूधलाई मिल्कशेकका रुपमा पिउनु स्वास्थका...
अम्बाको सिजन शुरु भएको छ । अम्बामा कम क्यालोरी र कम चिनी हुन्छ । त्यसैले तौल घटाउने सोच बनाइरहेका मानिसले दिनको एउटा अम्बा खाँदा फाइदा हुन्छ । भारतको राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका डा. अरुण दधीचबताले अम्बाको अचार वा जुस बनाएर खाँदापिउँदा...
टन्सिल निको बनाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय..
टन्सिल मासिनलाई लागिरहने मध्येको एउटा रोग हो । यसले धेरैलाई सताउने गरेको छ । मौसममा आउने परिवर्तन, चिसो तातो खान आदीका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या हुन जान्छ । तसर्थ हामी आज टन्सिलको...
काठमाडौं -मान्छेको शरीरमा ससाना डल्ला जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्छ । कसैकोमा एउटा मात्र होला भने कसैकोमा सयवटा डल्ला होलान् । यी डल्ला हेर्दा डरलाग्दा देखिन्छन् तर यिनले खासै हानि गर्दैनन् । सौन्दर्यलाई भने यिनीहरूले बिगार्छन् । सौभाग्यवश, यस्ता डल्ला...
गर्भमा किन रहन्छ बच्चा ९ महिना ९ दिन ?
एजेन्सी– सामान्यतया गर्भमा ९ महिना ९ दिन नै बच्चा किन रहन्छ ? यो धेरै नसोचिएको वा नगरिएको प्रश्न हो । तर, यसको पछाडि वैज्ञानिक कारण भने छ । हाम्रो ब्रह्माण्डका ९ ग्रहहरूले आआफ्ना किरणबाट गर्भमा हुर्किरहेको बच्चालाई विकसित गर्न सहयोग गर्छन्...
चार वर्षे दुई बच्चाको भिडियो जसले जितिरहेछ विश्वको मन
एजेन्सी– हामीलाई पक्कै लाग्छ, हाम्रो जीवन भनेको समस्या र गुनासाहरुको एउटा संकलन हो । तर, फेरि हामीले तनावलाई व्यवस्थापन पनि गरिरहेका हुन्छौँ । तर, तनावले कहिल्यै पनि छोड्दैन । किनकि हामी जागिर खाइरहेका साथीहरुले पनि भनेको सुन्छौँ– जिन्दगीमा लास्ट तनाव...
के हो साइलेन्ट हर्टअट्याक ?
हृदयाघात (हर्टअट्याक) र यससँग जोडिएका लक्षणको बारेमा त धेरैलाई जानकारी छ । तर, के तपाईंलाई ‘साइलेन्ट हर्ट अट्याक’बारे जानकारी छ ? यो कुराको जानकारी सबैलाई हुन जरुरी छ । किनकि यो एउटा त्यस्तो अट्याक हो, जसको कुनै लक्षण देखिँदैन ।...
'मसँग प्रचण्डले भेटेकै हुन्, सडकबाट पाँचजनाले माग्दैमा राजीनामा दिन्नँ'
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसँग सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटेको स्वीकारेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई शुक्रबार अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले आफूसँग प्रचण्डले भेटेको स्वीकारेका हुन्। तर आफूले कुनै पनि नेताको निवासमा छिरेर भेटघाट नगरेको पनि...
यस्तो छ राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका निर्णय
बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर एउटा निर्णय गरेका छन् । आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशस्तरका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, पीसीआर परीक्षणका...
तजिकिस्तानसँग नेपाल पराजित
एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोटअन्तर्गत समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपाली राष्ट्रिय यू–२३ फुटबल टोली ताजिकिस्तानसँग पराजित भएको छ । तजिकिस्तानको रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोली ताजिकिस्तानसँग ६–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । यस हारसँगै...
रन्जन कोइरालालाई दिएकाे सफाइबारे प्रधानन्यायाधीश जबराले भने–
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबारले यसअघि डिआइजी रन्जन कोइरालालाई दिएको सफाइबारे पनि अहिले विवादमा तानिएको छ । अब उनले यस विषयमा कुरा मुख खोलेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले जबराले श्रीमतीको हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका कोइरालालाई आफूले सफाइ नदिइएको बताएका छन् । उनले...
म पदको लोभी होइन तर राजीनामा दिन्नँः प्रधानन्यायाधीश जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफू पदको लोभी नभएको बताएका छन् । उनले अहिले आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन् । ‘म संविधानको इमान्दार पदाधिकारी हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘मलाई संविधानले नै यो पदमा ल्याएको छ । संविधानको विधिबाट आयो भने महाभियोग...
दल मौन र वकिल विभाजित हुँदा न्यायाधीशहरुलाई गलाउने रणनीतिमा चोलेन्द्र
बिहीबार सर्वोच्च अदालत अघिल्ला तीन दिनको तुलनामा सुनसानजस्तै थियो। पेसी चढेका झगडिया र तिनका कानुन व्यवसायी पनि छिटफुट देखिन्थे। किनकि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुने निश्चितप्राय थियो। त्यही भएर धेरै उपस्थित नै भएनन्। सधैं अरुका झगडामा निसाफ दिने सर्वोच्च अदालत...
कुखुरा पहिला जन्मियो कि अन्डा ?
पहिला अन्डा आयो कि कुखुरा ? यस विषयमा प्राचीन समयदेखि नै बहस सुरु भएको थियाे, तर पनि यसमा कसैको एकमत भने थिएन ।सदियौँदेखि यस सवालले वैज्ञानिक तथा दर्शनशास्त्रीहरूको दिमाग घुमाइरहेको थियो । अब तपाईं भन्नुस् कि यी दुईमध्ये कुन पहिला...
मधुमेहले आँखाको दृष्टि गुम्ने खतरा
काठमाडौँ– संसारमा कूल अन्धोपनामध्ये चार दशमलव आठ प्रतिशत मधुमेहकै कारणले हुने गरेको देखिएको छ । समयमै उपचार नगरे मधुमेह रोग र यसबाट विभिन्न असर हुन सक्छन् । डायबेटिक रेटिनेप्याथी मधुमेहको जटिलतामध्ये एक प्रमुख अवस्था हो । मधुमेहले गर्दा आँखाको...
तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा उत्कृष्ट फिटनेस सेन्टर ‘बब्स जिम’ मा ५० प्रतिशत छुट
पोखराको लोकप्रिय फिटनेस सेन्टर बब्स जिम तेस्रो बर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रति महिना ५ हजार शुल्क रहेको बब्स जिममा बार्षिक उत्सवको अवसरमा एक हप्ता भित्र बुकिङ गर्ने बार्षिक ग्राहकलाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको बब्स जिमका अध्यक्ष बैभव पौडेलले...
धरान एमालेमा ओली-नेपाल गुट कायमै, बने समानान्तर कमिटी
नेकपा (एमाले)को कात्तिक ९ गतेदेखि देशभर एकैसाथ पालिका अधिवेशन सुरु भयो। अधिवेशनका क्रममा एमालेले कयौं ठाउँमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेकाे छ तर कतिपय ठाउँमा विवादकाबीच समानान्तर कमिटीहरु गठन भएका छन्। केही वडामै समानान्तर कमिटी बनेकाे सुनसरीमा विवादका कारण दुई ठाउँमा अधिवेशन भएका छन्।...
ओलीलाई भुसालको पत्र : १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरियोस्
नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बिहीबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा रहेका उनले बिहीबार र शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी...
एमाले महाधिवेशनमा १५ सय ३६ प्रतिनिधि, ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराइने
नेकपा एमालेको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १५ सय मात्रै प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन्। बिहीबार ललितपुरको च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या टुंग्याएको हो। बैठकले १०औँ महाधिवेशनमा १ हजार ५३६ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने पक्का गरेको...
तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि देशभित्रका करिब २ सयभन्दा बढी महिला न्यायाधीश लुक्न विवश बने। कट्टरपन्थी तालिबानले देश कब्जा गरेसँगै उनीहरूले आफ्ना सदस्य जेलबाट निकालेका थिए। कैदीहरू मुक्त गरिए। तीमध्ये केही अपराधी यस्ता थिए जो कुनै समय महिला न्यायाधीशहरूले सजाय तोकेर जेलको चिसो हावा खाइरहेका...
तीन पार्टीको महाधिवेशन मंसिरमा, एमाले र राप्रपाको जुध्यो
आगामी मंसिरमा तीन पार्टी नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को महाधिवेशन हुने भएको छ । आज मात्रै काँग्रेस र राप्रपाले महाधिवेशनको संशोधित तालिका सार्वजनिक गरेका छन् भने एमालेले यसअघि नै महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको छ । ...
कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ ब्लड क्यान्सर ?
रगतमा विभिन्न कोषिकाहरू हुन्छन् । जसलाई आरबिसी र डब्लुबिसी भनिन्छ । रगतको तिनै कोषिकामा हुने क्यान्सर नै ब्लड क्यान्सर हो । ब्लड क्यान्सर एउटा प्राणघातक रोग हो । जसको उपचार समयमा नै हुन सकेन भने मानिसको ज्यानसमेत जाने गर्दछ ।...
हाेरगन जसले व्यापार सुरु गर्न एउटै घर पनि बेचिन्
एजेन्सी– आजभोलि हरेकजसो सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्री बेच्ने पसलमा महिलाहरुको निकै भीड लागेको हुन्छ । एउटै पसलमा सबै ब्रान्डका सामान हुने भएकाले कतिलाई मेकअप किन्नु झन्झटिलो काम पनि लाग्छ– कुन क्रिमले छालालाई सुट गर्छ भन्ने कतिलाई थाहा नै हुँदैन । जो...